Prof Gaandi oo ku guuleystay doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka Juballand | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Prof Gaandi oo ku guuleystay doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka Juballand
Siyaasiga Maxamed Cabdi Gaandi ayaa ku guuleystay saaka doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka Juballand oo ka socota maalintii afaraad magaalada Kismaayo.
Maxamed Cabdi Gaandi ayaa ka guuleystay nin ay isku beel yihiin oo ay ku tartameen doorashada xubnaha aqalka hoose.
Gaandi ayaa dhowaan looga guuleystay doorashadii xubnaha aqalka sare ee Juballand oo uu u tartamay, waxayna arintani jebineysaa go’aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka dadban ee heer Qaran oo ahaa qofkii isku soo taaga doorashada aqalka sare uusan ka qeyb geli Karin doorashada aqalka hoose haddii uu guuleysto iyo haddii laga guuleysto intaba.
Maxamed Cabdi Gaandhi ayaa mar xilka wasiirka Gaashaandhiga ka soo qabtay dowladii Kmg aheyd ee uu hogaaminayey Madaxweyne Shiikh Shariif isagoo sidoo kale ka mid ahaa xildhibaanadii Baarlamankii dowladaas.
Kismaayo ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ee ay ka socdaan doorashada xubnaha aqalka hoose, waxaana illaa hadda lagu doortay in ka badan 20 xildhibaan, iyadoo xildhibaanada aqalka hoose ee laga rabo Juballand ay tiradoodu gaareyso 43 xubnood.